Dad kudhintay qarax miino duleedka magaalada Xudur - Tilmaan Media
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in meel ujirta 25 KM magaalada Xudur ay dad shacaba oo saaran mooto kula qaraxday miino kuwa dhulka lagu aaso ah.
Qaraxa miinada waxaa ku geeriyooday illaa lix ruux, halka 2 kalena ay dhaawacantay. Wararka ayaa sheegaya in dadka miinada laqaraday ay ahaayeen dad hal qoys kasoo wada jeeda oo usocday casumaad looga yeeray.
Qaraxyada miinooyinka dhulka lagu aaso oo siyaabo kala duwan loo gashay waa kuwa aad ugu soo laablaabta koonfurta Soomaaliya. Inkastoo ay jiraan dadaalo miino guris ah laakiin wali miinooyiinka dhulku waxay khattar ku yihiin nolosha dad faro badan.